Momba anay - Huai 'An Hongyu Medical Equipment Co., Ltd.
Hongyu Medical ny fifehezana kalitao Ny departemanta dia napetraka mba hijery akaiky ny hatsaran'ny fitaovana tsirairay, ao anatin'izany ny endrika, ny habe, ny fametahana ary ny fonosana. Ny fisafoana rehetra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny firenena sy fenitra anatiny, fitakiana manokana ihany koa ny mpanjifa. Indrindra ho an'ny filàn'ny mpanjifa manokana, ny mpiasan'ny fanaraha-maso kalitao dia manadino ny antsipirihany bebe kokoa amin'ny antsipirihany, mba hahafahana mameno ny filan'ny mpanjifa tanteraka. Izany no antony andefasan'ny mpanjifantsika azy. dia heverina ho manan-danja tokoa ho antsika, amin'ny alàlan'ny fanamboarana OEM / ODM matihanina any Chine.
KPI Fanaraha-maso ny kalitao (Index Index fampiasa amin'ny tena ilaina):
1.Material. Ny akora fitaovana medikan'i Hongyu dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra GB / T1220-2007 ary GB / T3620.1-2016.
2. Ny fandeferana Ny haben'ny fandeferana ny fitaovam-pitsaboana Hongyu dia tokony ho kely kokoa noho ny fandeferana aseho amin'ny sary hoso-doko.
3. Ny malefaka mahavelona. Ny fantsom-bavan'ny fitaovana medikaly Hongyu dia tsy maintsy ho latsaky ny 0.8µm.Tena azo antoka ny fisehoana.
4. Fitsapana aretin-tsaina.Ny fitsapana dia tsy maintsy tanterahina araka ny mahazatra standard GB / T230.1-201.
5. Fanandramana-miandalana.Ny fitiliana ny rano mangotraka dia ampiasaina hatrany araka ny fenitra YY / T 0149-200
Fantatsika fa ny fifehezana kalitao hentitra no fototry ny zavamaneno avo lenta. Hongyu Medical dia nanisy lanja foana ny antsipiriany momba ny vokatra ary manome toky ny mpanjifa ny fitaovana fitsaboana tsara.
Serivisy aorian'ny varotra any Hongyu
Huai'an City Hongyu Medical Devices Co, Ltd dia mifanaraka amin'ny fitsipika "lazaniny voalohany, fahatokisana voalohany", nanao izao fanoloran-tena manaraka izao:
1.Mampiasa serivisy fampahalalam-baovao maimaimpoana, fanohanana ara-teknika;
2. Fanomezana serivisy nanome.Within ny antoka, rehefa niseho ny olana indrisy tamin'ny kalitaon'ireo zavamanenoina noho ny tsy fahavoazana ho an'ny olona dia hosoloina maimaim-poana ny fitaovana;
3. Valiny ao anatin'ny 24 ora noho ny fanontanianao rehetra. Ho azo ekena ny fangatahanao ao anatin'ny 24 ora rehefa mandefa aminay ny fangatahanay amin'ny tranokalanay izahay.
4.Fandefasana fotoana haingana. Toy ny mahazatra dia havoaka ao anatin'ny 48 ora ny santionanao santionany.
5. Manaraka anay ary avelao ny hafatra rehetra amin'ny fotoana rehetra: